Akụkọ Chintan Jain na Martech Zone |
Edemede site na Chinta Jain
Ịre ahịa nwere ike ịkagbu onye ọ bụla. Ị ga-enyocha ndị ahịa gị lekwasịrị anya, jikọọ na ha na nyiwe dị iche iche, kwalite ngwaahịa gị, wee soro ruo mgbe ị mechiri ire ere. Na njedebe nke ụbọchị, ọ nwere ike ịdị gị ka ị na-agba ọsọ marathon. Mana ọ gaghị adị oke oke, naanị megharịa usoro ahụ. Automation na-enyere nnukwu ụlọ ọrụ aka irube isi n'ihe ndị ahịa na-achọ yana obere azụmaahịa na-adị mkpa na asọmpi. Yabụ, ọ bụrụ